साँच्चिकै जोडी बन्नेबारे के भन्छन् ‘तरकारीवाली’ र सन्जित ? (भिडियोसहित) – An Online Entertainment News Portal
HomeEntertainmentसाँच्चिकै जोडी बन्नेबारे के भन्छन् ‘तरकारीवाली’ र सन्जित ? (भिडियोसहित)
साँच्चिकै जोडी बन्नेबारे के भन्छन् ‘तरकारीवाली’ र सन्जित ? (भिडियोसहित)
May 23, 2018 sutraentertainment Entertainment, Event, Kollywood, News, Videos 0
गत शुक्रवारदेखि प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘लम्फू’ मा अभिनित दुई कलाकार कुशुम श्रेष्ठ ‘तरकारीवाली’ तथा सन्जित भण्डारीको यतिबेला निकै चर्चा चुलिएको छ । एउटा फोटोले चर्चा कमाएर फिल्मको दुनियसम्म आईपुगेकी ‘तरकारीवाली’ र अभिनेता सन्जित फिल्म ‘लम्फू’ मा जोडीको रुपमा देखिएका छन् । केहीदिन पहिले मेगा कलेजमा पुगेकी तरकारीवालीसँग सन्जित पनि पुगेका थिए । फिल्ममा जोडीको रुपमा देखिएको यो जोडी साँच्चिकै जोडी हुने सम्भावनाबारे दुबैले यसरी मुख खोलेका छन् ।
सर्यो फिल्म ‘ब्ल्याक’ को प्रदर्शन मिति, यस्तो छ कारण
एउटै स्टेजमा एकसाथ तीन विजेता छानिदै, तर कसरी ?